नेपालीले केही सिक्ने होकि ! देशका लागि केही नगरेसम्म भत्ता त्याग्ने नेदरल्यान्डको राजकुमारीको घोषणा !
काठमाडौं : नेपालमा राजनीति गर्नेहरुलाई कहिल्लै राम्रो नजरले हेर्न सक्ने अवस्था रहेन् । जनताले राजनीतिलाई फो’होरी खेल भन्छन् ।जनतामा राजनीतिप्रति आस्था नभएको भन्ने कुरा चाँही गलत्त हो ।
नेपालमा भएको के हो भने नेपालीहरु व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहान्छन् । राजबतन्द्र हट्नुका पछाडिको मुल कारण भनेको सबै समान हुनुपर्छ भन्ने नै थियो ।तर राजा हटेसँगै देशमा सयौं राजाहरु आएपछि जनता पुनः निराश भएर बसेका छन् । राजाको तड’कभडक धेरै भयो ।
जनताको अवस्था दैनिक ख’राब हुँदै गयो भनेपछि नै जनतालाई अहिलेको व्यवस्था चाहिएको थियो ।यदि अहिले जे चल्दैछ यो नै आजको व्यवस्था हो भने त जनता पछुताउनुपर्ने बाहेक अरु केहि छैन । नेपालमा मात्रै यस्तो होईन, विश्वका विकासशील देशहरुको कथा हो ।
अन्य देशहरुमा राजा नै भएपनि त्यसरी विलासी हुँदैनन् । जनताको पैसामाथि रजाँई गर्ने शोक उनीहरुमा हुँदैन । यस्तै नेदरल्याण्ड्सको डच सिंहासनको उत्तरा’धिकारी र राजकुमारी अमेलियाले हालै गरेको घो’षणाले सबैको मन जितेको छ ।
उनले वार्षिक रुपमा प्राप्त हुने झण्डै २३ करोड भत्ता लिन अस्वीकार गरेकी हुन् । अमेलिया ७ डिसेम्बर २०२१ मा १८ बर्षको हुनेछिन् । कानूनको अनुसार उनलाई भत्ता दिइनेछ तर बदलामा उनले केही गर्नुपर्दैन् ।
केहि नगरीकन करोडौको भत्ता लैजाने कुराले उनी असहज भएकी हुन् ।एमेलियाले यस निर्णय जानकारी डच प्रधानमन्त्री मार्क रुट्टलाई गराएकी छिन् ।
उनले यो कठिन समय, विशेष गरी कोरोनाबाट प्रभावित विद्यार्थीहरूको जीवन कष्टकर भएको बताएकी छिन् ।त्यसकारण, कलेज पूरा गर्नु अघि, उनले सो अधिकारको रूपमा त्यागिन् । अमेलिया नेदरल्याण्ड्सको राजा अलेक्ज्याण्डरको जेठी छोरी हुन् ।
भर्खर उनले आफ्नो स्नातकको अध्ययन पूरा गरिन् । नेदरल्याण्डका सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार उनले भत्तामा झण्डै १८ करोड र राजपरिवारका सदस्यलाई ४ करोड १५ लाख भन्दा धेरै पाउँछिन् ।
२०७८ भाद्र १६, बुधबार १२:३१ गते 1 Minute 234 Views